Sunday, 14 April 2013 05:04	नागरिक
सुकृत नेपाल- भित्तामा फेरिने वैशाखको क्यालेन्डरसँगै धेरैले नयाँ सपना बुन्न थाल्छन्। राम्रो काम गर्ने संकल्प राख्न नयाँ वर्ष नै पर्खनु एउटा बहानाजस्तो बनेको छ। सबैमा नयाँ संकल्प भरिदिन आउने २०७० सालबाट नेपाली सिनेकलाकार किन अछुतो रहन्थे र! उनीहरूलाई पनि यसपालिको नयाँ वर्षले छोइसकेको छ।
आफ्ना फिल्मले राम्रो व्यापार नगरेको अवस्थामा कलाकारहरू नयाँ वर्षमा मठ मन्दिर गएर संकल्प गर्छन्। फिल्म राम्रो होस् भनेर प्रार्थना गर्छन्। अभिनेता भुवन केसीको नयाँ वर्षको संकल्प अझ राम्रो फिल्म बनाएर दर्शकका लागि सुम्पनु हो। नयाँ वर्षको संकल्पबारे केसी भन्दै थिए, 'खराब बानीलाई सुधार्ने कोसिस गर्छु।'
अभिनेत्री झरना थापा आउने नयाँ वर्षमा अझ राम्रा फिल्म खेल्ने मुडमा रहेको बताउँछिन्। 'मेरो नयाँ वर्षको संकल्प एकदम चुजी हुने हो। म प्रायः फिल्म रोजेर खेल्दिनँ थिएँ तर अबचाहिँ राम्ररी विचार गरेर रोजेरमात्र फिल्म गर्नेछु,' उनले सुनाइन्।
अर्की अभिनेत्री विनीता बरालको नयाँ वर्ष संकल्प बडो अचम्मको छ। नयाँ वर्षको उनको रेजुलुसन टन्न पैसा कमाउनु हो। यसका साथै सामाजिक कामहरूमा पनि लाग्ने उनको संकल्प छ। उनी भन्छिन्, 'यही वर्षदेखि महिला हिंसाविरुद्ध अभियानमा लाग्नेछु।'
नयाँ वर्षलाई महत्व दिएर ठूल्ठूला योजना बनाउनेमात्र हुन्छन् भन्ने होइन। नयाँ वर्षलाई सामान्य रूपमा लिने कलाकार पनि छन्। खासै संकल्प नराखेका नायक आयुष रिजाल आफ्नो धेरै रिसाउने बानीलाई हटाउने र खराब बानी सुधार्ने बताउँछन्। उनले भने, 'म नेपाली सिनेमाका साथै भोजपुरी फिल्महरूलाई पनि निरन्तरता दिने पक्षमा छु।'
खानपानको समय व्यवस्थापन गर्न नसक्दा दिक्क बनेकी नायिका प्रियंका कार्की नयाँ वर्षसँगै आफ्नो स्वास्थ्यमा सुधार ल्याउने कोसिस गर्नेछिन्। 'कामले गर्दा खाने समय मिलिरहेको हुँदैन, त्यहीकारण कहिलेकाहीँ विसन्चो हुन्छु,' उनले सुनाइन्, 'त्यसैले खाना खाने समयको व्यवस्थापन नै मेरो नयाँ वर्षको संकल्प हो।'
अहिले हट नायिकाको सूचीमा रहेकी जिया केसी भन्दै थिइन्, 'मेरो नयाँ वर्षको संकल्प अझै बढी फिल्ममा काम गर्ने हो। म आफ्नो नराम्रो भएको छविलाई सुधार्ने कोसिस गर्छु।' हट नायिका जियाले अब हट फिल्महरू कम खेल्ने सोच बनाएकी छिन्।
आफ्ना धेरै कुराहरू परिवर्तन गर्ने सोचमा छिन्, नायिका रेखा थापा। उनी भन्छिन्, 'अब नयाँ वर्षदेखि फिल्महरू पनि छानेर मात्र खेल्छु। एउटै फिल्म गर्ने तर राम्रो गर्ने।' वर्षमा एउटामात्र फिल्म बनाउने र एक-दुई फिल्ममा मात्र अभिनय गर्ने रेखाको नयाँ वर्षको संकल्प हो।
नयाँ वर्षको मेरो सँकल्प भनेको म मेरो सेतो उम्रिएको कपाललाई कालो बनाउने सोचमा छु '। कपालले गर्दा म कस्तो बुढो जस्तो देखिएको छु। अलि शरिरको पनि हेरचाह गर्ने सोचमा छु।
'पहिले जति पनि चाहिने-नचाहिने काम गरियो, ती सबै सुधार्दै लैजान्छु,' उनले भनिन्। राम्रा फिल्म बनाउन, अभिनय गर्ने र घरपरिवारलाई पनि धेरै समय दिने उनको संकल्प रहेको छ। 'रिसाउने बानी सुधार्छु,' उनले भनिन्, 'अलि मुडी पनि छु। नयाँ वर्षदेखि कम हुन्छु कि!' रोजेर राम्रा फिल्ममा मात्र अभिनय गर्ने उनले सोच बनाएकी छिन्।
हास्य अभिनेता जितु नेपालका लागि नयाँ वर्षले रक्सी कम गराउँदै छ। उनले सुनाए, 'नयाँ वर्षमा एकदमै कम ड्रिंक गर्छु र कार्यक्रमहरूमा पनि नयाँ रूपमा प्रस्तुत हुनेछु।'
संविधानसभा निर्वाचनको अन्योल भइरहेको अवस्थामा अर्का हास्य अभिनेता सीताराम कट्टेल भने भोट हाल्ने बताउँछन्। 'चुनाव भएछ भनेचाहिँ नयाँ वर्षमा भोट हाल्छु,' उनले सुनाए, 'नेताहरूले अवसर दिएनन् भने कसको के लाग्छ र!' हास्य टेलिशृंखला 'मेरी बास्सै' मा फरक-फरक भूमिका निर्वाह गर्दै आएका उनी भन्छन्, 'नयाँ वर्षमा अझ नयाँ पात्र छनोट गरेर दर्शकलाई भरपूर मनोरञ्जन दिनेछु।'
क्या मज्जाको नयाँ वर्ष! (2013-04-13)
अपराधमा अग्रणी (2013-04-11)
खै, के चल्छ यहाँ? (2013-04-11)
वर्षैभरि दन्त बजान (2013-04-11)
नैतिकताको ठेक्कापट्टा (2013-04-07)
सय शुक्रवार, जय शुक्रवार (2013-04-07)
'बाबुरामको जय होस्' (2013-04-07)